अहिले सम्म फरार रहेका सुन तस्करका अभियुक्त एसएसपी श्याम खत्री कहाँ थिए अहिले सम्म ? खत्रीकै श्रीमतीले गरिन यस्तो खुलासा ! || सुनौलो नेपाल
अहिले सम्म फरार रहेका सुन तस्करका अभियुक्त एसएसपी श्याम खत्री कहाँ थिए अहिले सम्म ? खत्रीकै श्रीमतीले गरिन यस्तो खुलासा !
काठमाडौं । ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा व्यापक खोजी भइरहेका अभियुक्त एसएसपी श्याम खत्री बिहीबार मोरङ जिल्ला अदालतमा आफैँ उपस्थित भएका छन् । यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी श्याम खत्री, सुन लगानीकर्ता एमके अग्रवाल र गोरेका भाइ रमेश उप्रेतीविरुद्ध ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको थियो । सुन काण्डका मुख्य अभियुक्त बनाइएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ले मोरङ अदालतमा सुन तस्करीको सेटिङबारे एसएसपी श्याम खत्रीलाई जानकारी भएको बयान दिएका थिए ।
मुख्य अभियुक्त भनिएका गोरेले तस्करी सुनको सेटिङको सबै दोष एसएसपी खत्रीको टाउकोमा खन्याएका थिए । अब खत्री आफैं अदालतमा उपस्थित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा खत्रीको बयानलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । खत्रीले गोरेले लगाएका अभियोगलाई स्वीकार गर्लान् या नयाँ तथ्य ल्याउलान्, त्यो पनि चासोको विषय बनेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको समितिले गोरेको समूहले विभिन्न समयमा गरी ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
साढे ३३ किलो सुन गायब र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा अभियुक्तमध्ये चर्चित नाम हो एसएसपी श्यामबहादुर खत्री । यो प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि उनी फरार थिए । खत्री यसपटकमात्रै सुन तस्करीमा जोडिएका भने होइनन् । खत्री यसअघि २०७३ पुस २१ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बरामद गरेको सुन काण्डमा पनि पक्राउ परेका थिए । पछि उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । त्यतिबेला पनि नेपाल आएको साढे ३३ किलो सुन गोरेकै भएको अनुसन्धानबाट खुलेको भए पनि उनको वास्तविक नाम र ठेगाना पत्ता लगाउन नसक्दा उनलाई फरार अभियुक्त तोकिएको थिएन ।
एसएसपी खत्री उपस्थित भएपछि मोरङ जिल्ला अदालत परिसरमा उनकी श्रीमती गीता खत्री पनि भेटिइन् । उनले आफ्ना श्रीमान् लुकेर नबसेको दाबी गरिन् । उनले आफ्ना पति वैशाख ११ गते भारतमा साथीको छोरीको बिहेमा गएको र त्यही उनको ढाड सड्किएपछि उपचारमै रहेको बताइन् । एसएसपी खत्रीको सुन तस्करीमा कुनै संग्लनता नरहेको उनको दाबी छ । भारतबाट फर्किएपछि आफूहरु वकिलको सल्लाहमा अदालतमा उपस्थित भएको उनले बताइन् ।आरोपी आफैं अदालतमा उपस्थित भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भन्ने हिसाबले श्याम खत्री आफैं अदालतमा उपस्थित भएको सरकारी अनुसन्धान समितिले बताएको छ । समितिका एक सदस्यले खत्रीलगायत जोकोहीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार समितिलाई रहेको बताए ।
“यो निकै संवेदनशील विषय हो, कोही अदालतमा उपस्थित हुँदैमा अनुसन्धान गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । पूर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि अनुसन्धान गर्छौं,” ती सदस्यले भने । समितिले अन्य फरार अभियुक्त पनि अदालतमा आफैं उपस्थित भएर आत्मसर्मपण गर्ने सम्भावना रहेको बताएको छ ।